‘हामी उत्तर अमेरिकी साझा संगठन बनाउने अन्तिम प्रक्रियामा छौं’ : लक्यान लामा, सदस्य–सचिव, उत्तर अमेरिका तामाङ सम्मेलन आयोजक तदर्थ समिति – NamoBuddha Khabar
‘हामी उत्तर अमेरिकी साझा संगठन बनाउने अन्तिम प्रक्रियामा छौं’ : लक्यान लामा, सदस्य–सचिव, उत्तर अमेरिका तामाङ सम्मेलन आयोजक तदर्थ समिति
बुधबार, मंसिर २०, २०७४ | १७:४५:५३ |
मुलुकमा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पुर्ण शक्ति आफ्नो मुठ्ठीमा पारेर निरंकुशता लादिरहेको बेला विश्वभरका तामाङहरु भने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनका लागि काठमाडौंमा जुट्दै थिए । विसं २०५९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘तामाङ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’को थुप्रै बुद्धिजीवि र लोकतन्त्रप्रेमीहरुले प्रसंशा गरेका थिए, प्रतिगमनको बेला पनि तामाङहरु सशक्त ढंगले अघि बढेको भन्दै । यसपछि सन् २००६ मा भारतको दार्जिलिङमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय तामाङ सम्मेलन सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनमा संसारभरका तामाङहरु मात्रै हैन, तामाङ समुदायमाथि चासो राख्ने अमेरिकी मानवशास्त्रीद्धय डेबिड हाम्बर्ग र क्याथरिन मार्चले समेत भाग लिएका थिए । सन् २०१३ मा काठमाडौंमै तेस्रो अन्तराष्ट्रिय तामाङ सम्मेलन भएपछि भने तामाङ समुदाय सेलायो ।
यस्तो बेला उत्तर अमेरिका भरि छरिएर रहेका तामाङ समुदाय भने जर्मुराउन थालेको छ । यतिखेर उत्तर अमेरिकालाई समेटेर ‘उत्तर अमेरिका तामाङ सम्मेलन’को तयारी भइरहेको छ । आउँदो जनवरी १३ र १४ मा न्युर्योकमा हुने तय भएको यो सम्मेलनलाई नेपालबाट पनि बुद्धिजीबिहरुले चासोका साथ हेरेका छन् । केही महिना अघि काठमाडौंमा सम्पन्न एउटा भेलामा समाजशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामादेखि भाषाविद अजितमान तामाङसम्मले ‘उत्तर अमेरिका तामाङ सम्मेलन’ले विश्वभरका तामाङहरु समुदायलाई झक्झक्याउने दावी गरेका थिए भने यही सम्मेलनले ग्लोबल तामाङ सम्मेलनको अवधारणा समेत विकास गरेर रोकिएको चौथो तामाङ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए ।
नेपालबाट समेत यसरी चासोको रुपमा हेरिएको यो सम्मेलनको तयारी कहाँ पुग्यो ? यो सम्मेलनको अवधारणा कसरी विकास भएको थियो ? सम्मेलनले कस्ता–कस्ता सन्दर्भलाई बहसमा ल्याउने छ र तामाङ समुदायको सशक्तिकरणमा सम्मेलनको भुमिका कस्तो रहने छ ? यी जिज्ञासाहरु मेटाउन यसपटक नमोबुद्ध खबरले ‘उत्तर अमेरिका तामाङ सम्मेलन तदर्थ समिति’का सदस्य सचिव लक्यान लामासँग बातचित गरेको छ ।
सदस्य सचिव लामा पर्सा जिल्ला निर्मलवस्ती गाविस हालको ठोरी गाउँपालिकास्थित ब्रम्हनगरमा जन्मेका हुन् । नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंबाट स्नातक गरी त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनीसँग नेपालमै रहँदा कानून ब्यबसायीको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको अनुभव समेत छ । पछि उनको जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रालय हुँदैसमाज कल्याण परिषदमा सर्यो, र त्यहाँ उनले सहायक निर्देशकको जिम्मेवारी पनि बहन गरे । जहाँ रहे पनि सामाजिक गतिबिधिसित जोडिन चाहने समाजसेवी लामा सन् २००७ देखि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् भने तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको सचिव र महासचिव पदमा रही तामाङ समुदायमा सक्रियता देखाइसकेका छन् ।
भारतको दार्जििलङमा भएको दोश्रो तामाङ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको तर्फवाट विधान संशोधन कमिटीमा म थिएँ । आजसम्म विभिन्न तह तप्कामा काम गर्दै निरन्तर यही यात्रामा रहेको छु ।
उत्तर अमेरिका तामाङ सम्मेलनको अवधारणा कसरी विकास भयो ?
–यो अवधारणा विकास हुनुको मुख्य श्रेय तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकालाई जान्छ । अमेरिकामा सबै भन्दा पहिले दर्ता भएको तामाङ संगठन ‘तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका’ (टिएसए) लाई उत्तर अमेरिकामा छारिएर रहेका तामाङ संघ–संगठनहरुको साझा छाता संगठन बनाई यसको सामथ्र्यलाई अझ बलियो र गुणस्तरिय बनाउँदै लैजाने र यसलाई बृहत्तर तामाङ हितमा लगाउने आवश्यकता र सम्भावनाको खोजी गर्न टिएसएले गएको जनवरीको २६ र २७ मा न्युयोर्कमा एउटा भेला गरेको थियो ।
त्यो भेला निकै फलदायी बन्यो । उक्त भेलामा अमेरिकी राज्यहरुबाट मात्र नभई क्यानडाबाट समेत प्रतिनिधीहरु आउनु भएको थियो र उहाँहरु छलफलमा गहन रुपमा सहभागी हुनुभएको थियो । यही भेलाले नै ‘उत्तर अमेरिकी तामाङ सम्मेलन’को अवधारणा अघि सारेको हो । त्यतिबेला गत मे महिनाको २० र २१ तारिखमा न्युयोर्कमै यो सम्मेलन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो र टिएसएकै अध्यक्ष शान्त थोकरको संयोजकत्वमा म सदस्य सचिव रहने गरि २५ सदस्यीय आयोजक समिती नै गठन गरिएको थियो ।
अमेरिकामा सबै भन्दा पहिले दर्ता भएको तामाङ संगठन ‘तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका’ (टिएसए) लाई उत्तर अमेरिकामा छारिएर रहेका तामाङ संघ–संगठनहरुको साझा छाता संगठन बनाई यसको सामथ्र्यलाई अझ बलियो र गुणस्तरिय बनाउँदै लैजाने र यसलाई बृहत्तर तामाङ हितमा लगाउने आवश्यकता र सम्भावनाको खोजी गर्न टिएसएले गएको जनवरीको २६ र २७ मा न्युयोर्कमा एउटा भेला गरेको थियो ।
तर, सम्मेलनको मिति त सरेछ नि ?
–हो, मिति अलिकति सर्यो । तर, राम्रो कामको लागि मिति सर्यो । किन राम्रो भयो भने हामीले खासमा नाममात्रैको सम्मेलन गर्न चाहेका हैनौं । यो त हामीले उत्तर अमेरिका भित्र बस्नुहुने सम्पुर्ण तामाङहरुको साझा थलो बनाउन खोजेका हौं नि । त्यसो हँुदा हतारमा सम्मेलन गर्नु भन्दा बृहत्तर रुपमा सबैलाई समेटेर जाने प्रयत्न गर्यौं । सबैको भावनालाई अटाउना व्यापक डिस्कोर्स पनि त जरुरी थियो । त्यही भएर अलिक व्यापक र साझा भावना निर्माणको थलो बनाउने प्रयास गर्दा सम्मेलनको मिति सर्न पुगेको हो ।
तयारी पनि व्यापक भइरहेको होला ?
–तदर्थ समितिमा भएका हामी सम्पुर्ण साथीहरु आ–आफ्नो ढंगले, आ–आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म लागिरहेका छौं । पहिलोपटक सम्मेलन हुन लागेको भएर यसको विधानतिर लाग्नुपर्यो, त्यो काम भइरहेकै छ । यसको लागि त उपसमिति नै बनाएका छौं । आर्थिक संकलन उपसमिती पनि बनाएका छौं । प्रचार–प्रसारमा पनि काम भइरहेको छ । सबै समितिले तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छन् । सम्मेलनको भेन्यु बुक्ड भैसकेको छ । प्रतिनिधिहरुको बस्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छौं । लगभग अब हामी अन्तिम चरणमा छौं भन्दा पनि हुन्छ ।
त्यसो भए यतिबेला धेरैजसो समय सम्मेलनको तयारीमै विताइरहनु भएको छ ।
–अग्रज र साथीभाईहरुले सुम्पि दिनुभएको जिम्मेवारी त पुरा गर्नै पर्यो नि । सदस्य–सचिवको हैसियतले अधिकतम समय दिइरहेको छु । अघि नै भनिसकें, उत्तर अमेरिका भर नै हाम्रो साझा समस्या समाधान गर्ने संगठनको आवश्यकता बोधले यो सम्मेलनको अवधारणा विकास भएको हो । सम्पुर्ण उत्तर अमेरिका समेट्दै तामाङ समुदायको सारथी बन्नसक्ने शक्तिशालीसंगठन बनाउने अभियान पनि हो यो ।
उत्तर अमेरिका भर नै हाम्रो साझा समस्या समाधान गर्ने संगठनको आवश्यकता बोधले यो सम्मेलनको अवधारणा विकास भएको हो । सम्पुर्ण उत्तर अमेरिका समेट्दै तामाङ समुदायको सारथी बन्नसक्ने शक्तिशालीसंगठन बनाउने अभियान पनि हो यो ।
एउटा अनलाईनलाई यहाँले ‘सोत र साधन सम्पन्न, उत्तर अमेरिका भरीका सम्पूर्ण तामाङ समुदायको आस्था बोकी विश्व तामाङ समुदायकै पनि सारथी बन्न सक्ने संस्थाको परिकल्पना गरेका छौ’ भन्नु भएको रहेछ, यस्तो संभावना कसरी देखिरहनु भएको छ ?
–समस्या जहाँ पनि हुन्छ । प्रवासमा छरिरहेका तामाङ समुदायका आ–आफ्ना समस्याहरु छन् । मुलुकभित्रै पनि अनेक मुद्धामाथि बहस भइरहेका छन् । तर, यी सबलाई छलफलमा ल्याउन, समाधानको कोसिस गर्न, विभिन्न थलोमा छरिरहेका हाम्रा तामाङ समुदायलाई एउटै डोरी जोड्ने प्रयास गर्न अनि एकअर्कामा सहकार्यको वाताबरण निर्माण गर्न संगठन त चाहियो नि ? उदेष्यको बोकि हिँडेर मात्रै केही हुन्न, त्यसलाई हासिल गर्र्ने साधनको रुपमा त संगठन चाहियो । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहीँ निराकरण खोजिने त हो नि । हामीमा भएको समस्याको निराकरण गर्ने साधन भनेको हामीले परिकल्पना गरेको संस्था नै हो ।
फेरि यसमा सबैको समान उद्देश्य र अभियान पनि प्रष्ट छन् भने समस्या के बन्ला र ? मलाई त लाग्दैन यो ठुलो समस्या हो भनेर । त्यसैले यति ठुलो अभियानमा सानोतिनो समस्याले त्यति ठुलो हिस्सा बोक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको इतिहासलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विचारहरु सुनिन्छ । अन्य राज्यका संस्थाहरुको मनस्थिति कस्तो होला ?
–हो, तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको भिन्न इतिहास छ । यसलाई सम्बोधन गरेर नजाने भन्ने त कुरै आउँदैन । इतिहास भनेको संगठनको मात्र हैन, समुदायको पनि सम्पति हो । यसको सम्मान र संरक्षण गर्नु प्रत्येक सदस्यको दायित्व पनि हो । त्यसैले हामीले सबै संस्थाहरुलाई सम्मान दिँदै प्रत्येक संस्थाको इतिहासलाई पनि मिलाएर लैजानु पर्छ । साझा संगठनको मर्म भनेकै त यही हो । त्यसो नगरेको खण्डमा एकताको अनुभूति कसरी हुन्छ ? मेरो बिचारमा हामी सबै यसप्रति स्पस्ट नै छौ ।
भनेपछि अब उत्तर अमेरिकी साझा संगठन वन्ने प्रति ढुक्क हुनुहुन्छ ?
–यसमा ढुक्क नहुनुपर्ने कुरै छैन । अग्रज र विज्ञहरुको राय अनि अनुभवीहरुको अनुभवलाई बोक्दै र नयाँ सोच–विचारलाई अघि सार्दै हामी काम गरिरहेका छौ । उत्तर अमेरिकी साझा संगठन बन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौ र यही संगठन मार्फÞत हाम्रो भावी योजना तर्जुमा गर्ने अनि हाम्रो अभियान सफल हुने कुरामा पनि हामी पुर्ण रुपमा आशावादी छौ ।
तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको भिन्न इतिहास छ । यसलाई सम्बोधन गरेर नजाने भन्ने त कुरै आउँदैन । इतिहास भनेको संगठनको मात्र हैन, समुदायको पनि सम्पति हो । यसको सम्मान र संरक्षण गर्नु प्रत्येक सदस्यको दायित्व पनि हो । त्यसैले हामीले सबै संस्थाहरुलाई सम्मान दिँदै प्रत्येक संस्थाको इतिहासलाई पनि मिलाएर लैजानु पर्छ । साझा संगठनको मर्म भनेकै त यही हो ।
एक हिसाबले तपाइँहरु यतिबेला एकताबद्ध, साझा र एउटै शक्ति केन्द्र बनाएर जाने योजना गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, एकता भनेकै शक्ति हो । थुप्रै स–साना शक्तिलाई समेटेर तिनका साझा एजेण्डा सम्बोधन गर्ने केन्द्रिय शक्ति केन्द्र पनि भयो भने मात्रै हामी हरेक अभियानमा सफल बन्न सक्छौं । यसले ट्क्राउने हैन, जोड्ने काम पो गर्छ । यदि टुक्रिन गयो भने हाम्रो अभियान असफल भएको मान्नु पर्छ । त्यसैले हामी त्यस पक्षमा अति संवेदनशील छौ । हाम्रो अभियान कसैको विगतका इतिहास मेट्न हैन, न त विगतका उपलब्धीलाई ईन्कार गर्न नै हो । यो केवल समय र परिस्थिती अनुसार अभियानलाई फरक ढंगबाट परिचालन गर्नका निमित्त संघ–संगठनलाई एकताबद्ध गर्दै तामाङ समुदायको एउटै शक्ति केन्द्र बनाएर लैजान खोजेका हौं । अहिलेको सन्दर्भमा सबै संघ–संस्थालाई मिलाएर लानुको अर्को विकल्प म देख्दिनँ ।
–पक्कै हैन । बरु हिजो जो जहाँ जसरी समाज परिवर्तनका लागी अग्रपंतिमा हुनुहुन्थ्यो, ती सबै व्यक्ति विशेषलाई सम्मान गर्दै विगतका घट्नाक्रमलाई लेखनबद्ध गरी इतिहासलाई भावी पुस्ताको अध्ययन केन्द्र बनाउदै तामाङ जातीको सम्पति वनाएर राखिने छ । यसो गर्दा योगदान मेटिने भन्द पनि झन कदर हुनेछ ।
भनेपछि उत्तर अमेरिकाकै बलियो ‘केन्द्रिय संगठन’ बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, यसले गर्ने खास अभियान चाहिँ के के हुन् ?
–हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, आज हामी तामाङ समुदाय किन पछि परिरहेका छौं । खासगरि हाम्रो समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सशक्तिकरण जरुरी छ । यी सबै क्षेत्रमा हाम्रो समुदायलाई क्रियाशील गराई सबल, सक्षम र योग्य तामाङ जनशक्ति बनाउन प्रयास गर्ने हाम्रो अभियान हो ।
सम्मेलनमा बिभिन्न राज्यबाट प्रतिनिधित्व हुने डेलेगेट्सहरुको छनौट प्रकृया चाहिँ कसरी हुनेछ ?
–यसमा पनि हामीले गहन छलफल गरिसकेका छौं । तामाङ संघसंस्थाको रुपमा दर्ता भै सकेका राज्यबाट अधिकतम १० जनासम्म मनोनित गरी पठाउन सकिने व्यवस्था छ भने संस्था दर्ता नभएका राज्यबाट तीनजनासम्म प्रतिनिधी रहन सक्ने व्यवस्था छ । सम्मेलन आयोजक कमिटी व्यक्तित्वहरु त स्वतः प्रतिनिधि भइहाल्ने नै भए ।
अघि विधानको कुरा गर्नु भयो, नेतृत्वको पनि बहस त चलेकै होला ।
–संगठनका लागि नेतृत्व भनेको मेरुदण्ड नै हो । शक्ति सम्पन्न साझा संगठन बन्दै गर्दा नेतृत्वको वहस चल्नु स्वभाविक नै हो र सबैले स्वभाविक नै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । तर, यो बेला नेतृत्वमा को आउने बहस भन्दा पनि कसरी सबैलाई समाहित गरेर साझा संगठन बनाउने भन्ने बहस चाहिँ महत्वपुर्ण हो जस्तो लाग्छ । तैपनि नेतृत्वको गरम अभ्यास र बहस चल्नु एउटा गतिशील संगठनको लागि खुशीकै कुरा मान्नुपर्छ । अन्तत ः यसले संगठनलाई बलियो नै बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
खासगरि हाम्रो समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सशक्तिकरण जरुरी छ । यी सबै क्षेत्रमा हाम्रो समुदायलाई क्रियाशील गराई सबल, सक्षम र योग्य तामाङ जनशक्ति बनाउन प्रयास गर्ने हाम्रो अभियान हो ।
नेतृत्व छनौट प्रक्रिया चाहिँ ?
–निर्बाचन कमिटी नै गठन गर्ने प्रक्रियामा हामी रहेका छौ । छनौट प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाँही निर्वाचन कमिटीको गठनपछि गत बर्ष सम्मेलन तयारी बैठक स्वरुप भएको भेलामा भएका निर्णयहरु र तदर्थ समितीका विभिन्न बैठकबाट पारित निर्णयहरु समेतलाई आधार बनाएर निर्बाचन कमिटीले बनाएको मापदण्ड अनुसार निर्वाचन गरी कार्यसमितीको चयन गरिने सल्लाह भएको छ ।
नेतृत्वमा के–के गुण हुन जरूरी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–सबैको मनोभावनालाई बुझेर सहि र छिटो निर्णय दिन सक्ने अनि समय र परिस्थिति अनुसार चल्न सक्नेले राम्रो नेतृत्व दिन सक्छ जस्तो लाग्छ । यो जुनसुकै संगठनको हकमा लागु हुन्छ । जातिय संगठनमा चाँही यसको अलवा जातिय एजेण्डा राम्रो गरी बुझेको व्यक्तिले मात्र नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले नेतृत्वको सवालमा कुनै सौदावाजी गरिनु हुँदैन भन्नेमा म स्पष्ट छु ।
–जातीय संगठनमा तपाईको पृष्ठभुमि चाहिँ के हो ?
–भारतको दार्जििलङमा भएको दोश्रो तामाङ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको तर्फवाट विधान संशोधन कमिटीमा म थिएँ । आजसम्म विभिन्न तह तप्कामा काम गर्दै निरन्तर यही यात्रामा रहेको छु । ‘सामाजिक सेवा नेपाल’ नामकसंस्था खोलेर महिला र वाल–वालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दा रोजीरोटीका लागी सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीको रुपमा वकालत गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेकै बेला जातीय संगठनको पनि यात्रा थालेको हुँ ।
अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ कि ?
–यो सम्मेलन हामी सबैको साझा अभियान हो भन्ने सोचेर सकारात्मक भै सुझाव सल्लाह र नैतिक सहयोग मात्रै दिनु हुँदा पनि हाम्रो मनोबल बढ्न सक्छ । हरेक कार्यक्रम गर्न आर्थिक आवश्यक पर्ने कुरा मैले भनी रहनु पर्दैन, सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ । सबैले सक्रिय सहभागिता जनाउँदा हाम्रो अभियान सोचे अनुरुप सफल हुने भएकोले आयोजकको अपेक्षा पनि यही रहन्छ । यो इतिहास बनाउने ठिक समय हो जस्तो लाग्छ, त्यही भएर सबैजना एकमन भएर अघि बढौं ।